आज मिति २०७७ साल चैत १६ गते सोमबार, मार्च २९, तपाँईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ?
सोमबार, १६ चैत्र २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाण्डौं । आज मिति २०७७ साल चेैत १६गते सोमबार, । तदनुसार मार्च २९तारीख ।